कालिकोटमा चुलो छोएको भनि एक दलित महिला माथि कुटपिट | सबैले सेयर गरौँ
- नेपाली सन्देश आइतवार, बैशाख २८, २०७७ , 7.1K जनाले हेर्नुभयो
कालिकोटमा चुलो छोएको नाउँमा एक दलित महिला माथि कुटपिट हुनुको साथै अमानवीय व्यवहार गर्दै जुत्ताको माला लगाएको छ ।
कथित ठुलो जातको बिल्ला भिरेका भिजिल्यान्ते शोषकहरुले जातिको नाममा गरीब र सोझा दलितमाथि थिचोमिचो र अन्याय गर्दै आएको घटना धेरै भेटिन्छ । उनीहरूलाई कहिलै ज्ञान भएन मन्दिरको मुर्ति देखि भान्साको खाना पकाउने कसौंडी (भाडाकुडा) सम्म दलितले बनाउछ भनेर।
यस प्रचलनको सरकारको कान सम्म पुगोस् भनि यो घटनाको समाजिक सञ्जाल फेेेेेसबुकमा विरोध भएको छ ।
पंधेराबाट पानी भरी ल्याउने तामाको गाग्री दलितले नै बनाएको चल्छ तर दलितले छोएको पानी नचल्ने घटनाहरू पनि विरलै देख्न सकिन्छ ।
वाहा ! कति रमाईलो छ है नेपाली समाज र ?
पानी पानी नै रंग हुदैन । मैले सुने को थिए पानी को कुनै रंग हुदैन । जुन रंग मिसायो त्यही रंग हुन्छ । तर मान्छे मान्छे नै हो । मान्छेमा कुनै फरक हुदैन ।
हामी नेपाली एउटा सियो बनाउने उपाय छैन । भौतिवादको आँखामा तर जातिय छुवाछूत अनि जातिय विभेद कुरो गर्छौ । मेरो बुझाईमा हामी जब सम्म नेपाली जातिय मुद्दा बाट मुक्त हुन सक्दैनौं सु-शासन शान्ती अमन चयन र समृद्धी हुदैन ।
एकता नै समाज रुपान्तरण हो देश समृद्धि हो । सबैलाई एक सोचौं कुनै जाति विभेद नगरौं सबैले सेयर गरौँ ।